Mahoridhe Network Group inowedzera yakasarudzika Dominican Republic inoshandira kune yayo yakasarudzika portfolio yehupenyu zvigadzirwa uye zviitiko zvezororo
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Hotera & Resort Nhau » Mahoridhe Network Group inowedzera yakasarudzika Dominican Republic inoshandira kune yayo yakasarudzika portfolio yehupenyu zvigadzirwa uye zviitiko zvezororo
Kuputsa Kufamba Nhau • Dominican Republic Kuvhuna Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • nhau • ushanyi • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • USA Kuputsa Nhau
Mahoridhe Network Boka (HNG) nhasi yazivisa Ancora Punta Kana; yayo yekutanga Dominican Republic-yakavakirwa zvepamusoro zororo kupa. Iyo 299-unit, yese-suite chivakwa iri mune yekumusoro-kumagumo yeMediterranean-themed musha padyo yakavharika Juanillo gungwa maminetsi gumi chete kubva kunhandare yendege. Inozivikanwa neAAA senzvimbo yepamusoro yekuenda kunzvimbo dzeZororo Zhizha Punta Kana inozivikanwa pamhenderekedzo dzayo, kugamuchira vaeni uye nzvimbo yepamusoro paCaribbean yakakura inland marina uye mega-yacht inopisa nzvimbo. Iyo Ancora resort inopa yejunior, imwe, mbiri, uye matatu-makamuri ekurara uye dzimba dzekugara dzakavakirwa pakati pematanhatu maresitorendi, iyo Ancora Beach Club, ina mabara, mana madziva, iyo Kids Center uye yakakwana-yakagadzirirwa hutano uye nzvimbo dzehutano.
"HNG iri kuvaka mukurumbira wekuendesa zvisingaenzaniswi zvevaenzi nekugara pamberi pevatengi kudiwa kwenzvimbo nyowani, zvigadzirwa zvemhando yepamusoro uye zvakasarudzika zviitiko," akadaro Christopher D. Thomas, RRP, HNG Mutungamiri weBusiness Development. “Senyika huru uye dzakasiyana siyana dzeCaribbean, Dominican Republic inopa chimwe chinhu kune wese munhu uye tinofara kupa nhengo dzedu nevashanyi nzvimbo yakasarudzika yekufonera kumba kuzororo revhiki, zororo revhiki rese kana mamwe ese hupenyu hwavo. ”
Kirabhu Ancora - Inofambiswa neCarnival - inopa vashanyi mukana wekushandura rimwe zororo risingakanganwike muhupenyu hwezviitiko zvisingawanzoitika pazororo. Nhengo dzeClub dzinowana mari yakawanda pamabhengi ezororo uye kuwana kune yese HNG network yezvakaitika uye masevhisi anosanganisira maresitorendi muFlorida, Mexico uye ikozvino Dominican Republic, pamwe nenhengo-chete rwendo rwekufambisa kuburikidza neCrozVTT, chikepe uye yecht kirabhu kuwana uye organic spa kurapwa.
"HNG yakasarudzika pakuumba kudyidzana nemazita akakura mumitambo, varaidzo, mimhanzi, zvekutengesa nekutenderera kuti upe imwe nzira yakatwasuka, inotungamirwa nemararamiro," akadaro Orlando Arroyo, mutungamiri anozivikanwa nezve eco-Tourism, muridzi weboka rehotera. uye Ancora Co-Muvambi. "Iyi inzira yakatungamira kukura kwakasarudzika mumitezo yenhengo, mashandisiro uye huwandu hwenhengo kugutsikana."
Mahoridhe Network Boka rinobatana rakanangana nemazana ezviuru evanogona kufamba vafambi gore rega rega kuburikidza nehukama hwavo hwakasarudzika nemitambo inozivikanwa uye varaidzo franchise kusanganisira Miami Marlins, Miami HEAT, Orlando Magic, University of Miami, iyo Tampa Bay Rays, Live Nation, uye Florida Panther. Chikwata chevamiririri vehupenyu chichatanga kuunza vafambi kuAncora panguva yemitambo iri kuuya uye mwaka wekonzati.
Ancora ikozvino yave kutora nzvimbo, ichipa vafambi vamiririri chiyero chekutanga uye kupa Club Ancora ruzivo rwekushanya. Kubhuka kunowanikwa pamhepo kana nhare uye HNG Club Nhengo dzinoramba dzichikwanisa kuwana mukana weHNG wekuhwina mibairo miviri nhengo dzechikwata kuti dzibatsire nezvavanoda pakufamba. Vamiririri vanofarira wekutanga mumiririri-chete mwero vanogona kuisa kodhi CORALES kana uchibhuka pamhepo kwenguva shoma.